I-CMoW ngumbutho ongajonganga nzuzo wama-501(c)(3).
Ukubonelela ngemekobume eyamkelekileyo nebandakanyayo ekhuthaza ubugcisa, inzululwazi, kunye nokufunda okugxile kulwazi lokufunda nokubhala kubantwana nakwiintsapho.
Ukukhuthaza iMfundo yoSapho
Sibandakanya abantwana kunye neentsapho zabo kumava amnandi okufunda sisebenzisa amandla okudlala. Sibonelela ngendawo ekhuselekileyo, ecocekileyo, nenomtsalane apho abantwana bafumana ithuba elaneleyo lokuhlola. Sinikezela ngemiboniso esebenzayo kunye neenkqubo zeveki apho abantwana banokuphonononga umdla wabo wendalo.
Ukubonelela ngeXabiso kuLuntu lwethu
Sinqwenela ukuba negalelo kubumelwane kunye nothethathethwano noluntu. Sifuna kwaye sisebenzisane namanye amaziko asekuhlaleni kunye nemibutho ukudala ubuhlakani obunamandla obuphakamisa impembelelo entle yemyuziyam yethu.
Sazisa abantwana kuxabiso lwehlabathi lethu. Sixhasa uphuhliso lwezakhono ezisisiseko ezibalulekileyo ebantwaneni. Sinceda ukudala intlantsi evutha uthando lokufunda ubomi bonke.
Ukuqala ngo-1991, iqela labazali basekuhlaleni laqalisa ukulandela ingcamango “yokufunda ngezandla” kwiziko lokudlala. I-Junior League yaseWilmington, NC yazibandakanya kwaye yancedisa ekuphuhliseni ngakumbi umbono.
Emva kweminyaka eliqela yophando kunye nokufunda ngabazali, iinkokeli zoluntu kunye nabafundisi, iMyuziyam yaBantwana yaseWilmington yavula iingcango zayo ngo-Okthobha we-10, 1997.
Ngoluntu olwandayo kunye nentaphane yabantwana abalungele ukudlala ukuze bafunde, ngokukhawuleza kwaba Kucacile ukuba isiza sangoku asikwazi ukuhlalisa inani elandileyo leendwendwe. IMyuziyam yayisanda. Iinkqubo ezininzi zazi
yaziswa kwaye kwenziwa imiboniso emitsha. Uthando lweMyuziyam lwalusele lukhona ikhula kunye nobukhulu bayo. Yaba lixesha lendawo eyongezelelekileyo!
Imbali yeDolophu yaseWilmington
Ukuhlangabezana nenani elikhulayo labatyeleli, ngo-2004 iMyuziyam yathenga izakhiwo ezithathu eziquka iMyuziyam yezobuGcisa yaseSt. I-St. John's Masonic Lodge, iCawa yobuOthodoki yamaGrike, kunye neCowan House zizinto ezithandekayo kwimbali yeDowntown Wilmington. Zigcinwe namhlanje njengekhaya elitsha le-CMoW.
Siliqela elincinane lokuyila kunye nabantu abonwabileyo bonke abakhathalele into enye eyoyikekayo...ukunceda abantwana bafunde!
Sikunye senza usapho lwakho olunobuhlobo lwe-CMoW.
Usapho lwe-CMoW luhlala lukhula. Funda malunga namavolontiya, ama-internship, kunye namathuba emisebenzi.
Joyina Iqela &gt;
Dibana namalungu oluntu abumba iBhodi yethu yaBalawuli yangoku.
Ibhodi yabaLawuli &gt;